Homeसमाचारसुनको मूल्य तोलामा एक हजार बढ्यो, तोलाको कति पुग्यो त?
April 8, 2021 admin समाचार 4213
नेपाली बजारमा बि’हीबार सुनको मूल्य तोलामा एक हजारले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनु’सार बुधबार तोलामा ८८ हजार रुपैयाँमा का’रोबार भएको छापावाल सुन बिहीबार तोलामा एक हजारले बढेर ८९ हजार रुपैयाँमा कारो’बार भएको हो ।
यस्तै तेजाबी सुन तो’लामा ८८ हजार ५५० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । यस्तै बिहीबार चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ । बुधबार तोलामा १२४५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी बिहीबार बढेर तो’लामा १२६० रुपैयाँमा कारोबार भएको महा’संघले जनाएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्: राष्ट्रिय’सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र स्पेनका प्रथम उपप्रधानमन्त्री कारमेन काल्भोबीच स्पेनको एक्स्त्रेमादुरामा भेटवा’र्ता भएको छ । भेटका क्रममा नेपाल र स्पेनबीच आपसी कूटनीतिक सम्बन्धलाई अझै प्रभावकारी बनाउने वि’षयमा कुराकानी भएको थियो ।
अध्यक्ष तिमिल्सि’नासहितको नेपाली टोलीसँग एक्स्त्रेमादुरा प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुईलेरम्मो फर्नान्डेज भारासँग समेत भेट भएको छ । भेटमा स्पेनका लागि नेपाली राजदूत दावा फुटी शे’र्पासहित विभिन्न नगरपालिकाका प्रमुख तथा लुम्बिनी गार्डेन फाउन्डेसनका प्रतिनिधिको सह’भागिता रहेको थियो । लुम्बिनी गार्डेन फाउन्डेसनको आयोजनामा बुधबारदेखि तीन दिनसम्म आयो’जना हुन लागेको पिस कन्फरेन्समा सहभागी हुन राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसहितको टोली मङ्गलबार स्पेन आ’इपुगेको हो ।
सात करो’ड यूरोभन्दा बढी खर्च गर्दै स्पेनको काथेरेस नगरमा लुम्बिनी गार्डेन बनाउने एक महत्वा’कांक्षी योजना फाउन्डेसनले राख्दै आएको छ । सोही अभियानको उद्घाटन गर्न राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमिल्सिना स्पेन आएका फाउन्डेसनका महा’सचिव एकराज गिरीले जानकारी दिए ।
अध्यक्ष तिमि’ल्सिनासहित नेपाली टोलीमा लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकाका प्रमुख मनमोहन चौधरी, रामग्राम नगरपालिकाका प्रमुख नरेन्द्रकुमार गुप्ता, कपिलवस्तु नगरपालि’काका प्रमुख किरण सिंह, देवदह नगरपालिकाका प्रमुख हिराबहादुर खत्री र उपप्रमुख विद्यालक्ष्मी गुरुङ र लुम्बिनी गार्डेन प्रोजेक्ट’का प्रमुख आर्किटेक्ट उज्ज्वलमान शाक्यल’गायत छन् । रातोपाटीबाट
January 27, 2021 admin समाचार 4888
February 10, 2021 admin समाचार 4781
भाई वैदेशिक रोजगारीमा रहेको बेलामा जेठाजुले बु’हारीसंग फेसवुक म्यासेजमा यौ न प्र’स्ताव राखेको कुरा सार्वज’निक भएपछि अहिले ब वाल भएको छ । जेठाजु पनि वैदे’शिक रोजगारीमा भएको बेलामा २० हजार रुपैया सापटी माग्दा यस्तो प्रस्ताव
May 28, 2021 admin समाचार 3244
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (222969)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (214981)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (214657)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (212962)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (211841)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (210796)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (209396)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (209287)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (177951)